Wararka Maanta: Talaado, Oct 20, 2020-Puntland oo ka mamnuucday degaanadeeda in laga furto xarumaha Shifooyinka
Qoraal kasoo baxay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee maamulka Puntland, ayaa lagu sheegay, in loo mamnuucay si loo saxo shaqooyinka ay qabtaan shifooyinka.
Wasaaradda cadaaladda waxay ku amartay laamaha amniga ciddii ku xad guduubta amarkaan in laga qaado tallaabo waafaqsan sharciga.
Go’aankan ayaa kusoo beegmaya xilli uu haatan Garowe ku sugan yahay wadaad dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Sheikh Rusheeye yare, kaasoo dhawaan Somaliland ka mamnuucday inuu tago Laascaano.
Wadaadkan, oo aad caan uga ah baraha bulshada ayaa iska leh shifo lagu magacaabo “Daarul towba” oo kutaala Muqdisho, wuxuuna Garowe u tagay inuu ka sameeyo cillaaj, sidoo kalena qorsheyanayay inuu ka furto xarun cusub.
Qaar kamid ah culimada Garowe ayaa maalmihii ugu dambeeyay maamulka ka codsanayay in la joojiyo barnaamijka uu wadaadkan u yimid Puntland.